မိတ္ထီလာ ရဲစခန်းဝင်းတွင် ရဲအုပ်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံး - Yangon Media Group
သေဆုံးသူမှာ မိတ္ထီလာခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရေး/ထောက်ဌာန စိတ်မှ ရဲအုပ်အောင်နိုင်ထွန်းနှင့် ၎င်းဇနီး ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်းတို့ဖြစ် ကြောင်း၊ ရဲအုပ်အောင်နိုင်ထွန်း မှာ ယာနားထင်မှ နဖူးထက် ဖောက်ထွက် သေနတ်ဒဏ်ရာ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်းတွင် ယာနားသွေးထွက် ဒဏ်ရာတို့ဖြင့် သေဆုံးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ရဲအုပ်အောင်နိုင်ထွန်း၏လက်တွင် သေနတ်ကိုင် ထားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း မိတ္ထီ လာမြို့မရဲစခန်းထံမှသိရသည်။
အလောင်းများကို လူနာ တင်ယာဉ်ဖြင့် မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံပို့ဆောင်ပြီး ရင်ခွဲ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မိတ္ထီလာမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးကျော်ထင်က ”မနက်က တော့ လိုင်းခန်းမှာသေဆုံးနေ တာတွေ့ရတာပေါ့။ သူတို့အိမ် ရှေ့ခန်းမှာ။ လက်ရှိမှာ ရဲစခန်း ကနေ သေမှုသေခင်းရေးဖွင့်ပြီး တော့ စစ်ဆေးနေတာပေါ့”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မေ ၁၆ ရက် ကပြောသည်။
သေဆုံးသူနှစ်ဦးသည်အခင်း မဖြစ်မီညပိုင်းက စကားများခဲ့ ကြောင်း မိတ္ထီလာမြို့မရဲစခန်း ထံမှသိရသည်။ ယင်းအမှုနှင့်ပတ် သက်ပြီး မိတ္ထီလာမြို့မရဲစခန်း တွင် သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၁၂/၂ဝ၁၉)ဖြင့် ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ် ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
မယ်တော်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် မြန်မာ ၁ဝဝ ခန့်ကို တရားဝင်မှု ရှိ၊ မရှိ ထိုင်းအာဏာပိုင်များ ??
ကြက်တိုက် လောင်းကစားသူ ခြောက်ဦးကို ကြက်သုံးကောင်၊ လောင်းကြေးငွေများ၊ ဆိုင်ကယ်အစီး ၂ဝ နှင??